Tsara kokoa noho ny vitsika - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Tsara kokoa noho ny vitsika
Efa tao anatin'ny vahoaka be ianao izay nahatsapa ho kely sy tsy ampy? Sa nipetraka tamin'ny fiaramanidina iray ianao ary nahatsikaritra fa ny olona eny ambony gorodona dia kely toy ny harona? Indraindray aho dia mieritreritra fa eo imason'Andriamanitra dia toy ny valala mihintsan-drà mihintsana amin'ny loto isika.
Hoy ny ao amin'ny Isaia 40,22: 24:
Mipetraka eo ambonin 'ny boriborin' ny tany izy, ary izay mipetraka eo dia toy ny valala; Izy no mamelatra ny lanitra toy ny fisalobonana, ary mamoaka azy toy ny lay izay itoeran'ny olona iray izy; nambarany ireo andriana fa tsinontsinona izy ary noravany ireo mpitsara et earth an-tany: vantany vao nambolena izy ireo, raha vao afafy izy ireo, raha vantany vao miorim-paka ny fireneny, dia tsofiny izy ireo mba halazo sy ny sisa. Ny rivodoza dia entin'izy ireo toy ny akofa. Midika ve izany fa "tsy maintso afa-tsy" isika dia tsy misy dikany amin'Andriamanitra? Mety ho zava-dehibe ve izany?
Ny toko faha-40 amin'ny Isaia dia mampiseho amintsika ny mahatsikaiky amin'ny fampitahana ny olona amin'ilay Andriamanitra lehibe: «Iza no nahary ireo? Izay mamoaka ny tafiny araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy. Lehibe tokoa ny harenany ary matanjaka be izy ka tsy misy tsy ampy na dia iray aza »(Isaia 40,26).
Io toko io ihany no miresaka momba ny hasarobidintsika momba ny hasarobidintsika. Hitany ny zava-tsarotra atrehintsika ary tsy mandà ny hihaino ny raharahantsika isika. Lehibe lavitra amintsika ny halalin'ny fahalalany. Izy dia liana amin'ny osa sy reraka ary omeny tanjaka sy tanjaka.
Raha hipetraka amin'ny seza fiandrianana ambonin'ity tany ity Andriamanitra, dia mety ho toy ny bibikely ihany izy. Nefa eo foana izany, eto amintsika, ao amintsika ary mandinika tsara antsika.
Isika olombelona dia toa miahy ny fanontaniana ankapobeny momba ny dikany. Nahatonga ny sasany hino fa tsy nahy teto izahay ary tsy misy dikany ny fiainantsika. "Ary andao hankalaza!" Fa tena sarobidy tokoa isika satria noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Mihevitra antsika ho olona izy, izay samy manana ny lanjany; samy manaja azy araka ny fombany. Ao anatin'ny olona iray tapitrisa, ny tsirairay avy dia manan-danja toy ny an'ny hafa - sarobidy ny olona rehetra amin'ny mpamorona ny fanahintsika.
Ka maninona no toa variana loatra isika miezaka ny mandà ny dikany? Indraindray dia manompa sy manambany ary manevateva ireo izay mitondra ny sarin'ny Mpamorona. Adinontsika na tsy miraharaha ny hoe tian'Andriamanitra ny olona rehetra. Sa tena miavonavona loatra isika ny mino fa napetraka eto amin'ity tany ity ny sasany mba hanaiky fotsiny amin'ny "ambony" sasany? Ny olombelona dia toa voan'ny tsy fahalalàna sy fireharehana, ary fanararaotana aza. Ny hany vahaolana tokana amin'ity olana lehibe ity dia mazava ho azy fa ny fahalalana sy ny finoana ny nanome aina antsika ary noho izany dia misy dikany. Izao dia tsy maintsy mahita ny fomba ahafahantsika miatrika tsara ireo zavatra ireo.
Ny ohatra iray tokony hifampiraharahantsika amin'ny maha-olona misy dikany azy dia i Jesosy, izay tsy nitondra olona ho fako mihitsy. Ny andraikitsika amin'i Jesôsy sy ny tsirairay dia ny fanarahana ny ohatra nasehony - ny mamantatra ny endrik'Andriamanitra isaky ny olona hihaona amintsika sy hitondrana azy ireo mifanaraka amin'izany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ve isika? Amin'ny maha-mpamorona ny endriny, dia manan-danja aminy isika, ka nandefa ny zanany lahitokana ho faty isika. Ary lazainy daholo izany.